Radotiana | Voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008
« Tohin'ny voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008
Ela tsy nitoratorahana blao-gy... »
Voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008
Nampidirin'i radotiana | 12 Nov, 2008
Tafaverina soamantsara avy any Dago omaly alina aho. Ireto misy voan-dalana antsary vitsivitsy nentiko ho anao.
Mety hanomboka amin'izay angamba ny fanamboarana ity Lapan'ny Tanànan'Antananarivo ity. Tsikaritro nisy fefy fanitso vao atsangana manoloana ity sary ity tamin'ny Zoma lasa teo.
Efa misy ho jerena ny endriky ny Rovan'i Manjakamiadana raha avy lavitra.
Mety tsy ho azo ihodivirana ny fiovan'ny endriky ny tanàna manamorona an' Andranomena raha vao vita soamatsara ny trano vaovaon'ny Masoivoho Amerikana.
Miasa andro aman'alina ry zareo sinoa mpanamboatra ny hotely misy rihana 24 (tsy azoko antoka raha tena io tokoa no isa marina) eo Mandrosoa Ivato. Io maintso manjavozavo io izy amin'ny sary raha tazanina avy eny amin'ny arabe fefiloha hoany Ambohitrimanjaka. Mahatazana azy mandondona koa anefa ianao rehefa midina an'Ambohidratrimo iny.
Nivezivezy tamin'iny làlana mankany Toamasina sy Fianarantsoa ary Tsiroanomandidy iny aho tamin'ity indray mandeha ity ary dia nahatsikaritra fa efa maromaro ihany ireo biraom-pokontany mitovy endrika sy loko no efa voatsangana.
Asa na firy no isan'ireto fiaram-pitanterana misy rihana ireto ao Dago fa dia sendra ahy teo Manjakaray ity anakiray ity. Zotra mankany Toamasina. Alaivo sary antsaina ianao mipetraka eo amin'ny seza anoloana toa azy efa-dahy eo amin'ny sary amin'iny fidinan'i Mandraka iny.
Mety hiova tanteraka ny endriky ny tontolo fitanterana amin'ny posy ao Bira (Antsirabe) afaka taona vitsivitsy raha ny fahitako azy. Tsy ho ela dia ho zatra mandeha "KINGA" ny olona. 1000 ariary (5000fmg) ny saran-dalana hoan'ny olona iray. Afaka mitondra olona telo handeha amin'ny toerana telo samihafa ny mpamily KINGA. Haingana sady tsy dia mahasosotra ny mandeha aminy. Solika 3 litatra hono no laniny amin'ny halaviran-dalana 100 km.
Misy tanteraka ihany ireo nofinofiko tany aloha tany. Tsy mitebiteby firy intsony aho rehefa mandeha fiara amin'iny lalam-pirenena mampitohy an'i Toamasina sy Antananarivo, na Antananarivo sy Toliara iny. Miha manaja ny andaniny natokana ho azy ny fiara mandeha amin'ny arabe. Misy tsipika fotsy mitohy sy mitapatapaka mantsy ny arabe ankehitriny. Ny irariana dia mba hitohy ny fikojakojana azy ireny.
Tonga tany Dago ihany i Alpha Blondy tamin'ny farany. Takelaby dokam-barotra hita teny amin'ny arabe fefiloha hoany Ambohibao io eo ambany io.
Manana finday ny ankamaroan'ny olona. Ny finday marika ZTE ("Zanaky ny Tena Enjana" araky ny filazan'ilay mpanamory fiara namana iray izay) no tsikaritro ho be mpampiasa. Variana amin'ny findainy ity mpitarika posy iray any Toamasina ity.
Soratra manala azy nisodisody teo anoloako teny andalana.
Io ilay tsipika mitohy amin'ny arabe noresahiko etsy ambony fa hita tsara.
" Fikasana an'ny Sôfera, fa ny didy an'ny Môtera " :-)
Izy hono toy izany mihitsy e!
... Misotroa rano iray vera isa-maraina ihany na dia izany aza an :-)
This entry was posted on 12 Novambra, 2008 00:35 and filed under Ankapobeny .
38 Hevitra & 0 Verindrohy (trackback) amin\_'ny "Voan-dalana antsary avy any Dago - Nov 2008"
Misaotra eeeee! :)))
Nampidirin'i Vale 12 Nov 2008, 05:38
Tsara be ilay ANTANANARIVO "hollywood sign" ;-)
Ilay lapan'i tanana koa tena wow @ ilay sary!
My Fav : "Ny fikasana an'i sofera fa ny didy an'i motera" lol
Misaotra @ voan-dalana e!
Nampidirin'i Mirana 12 Nov 2008, 09:11
Miandry ny manaraka sahady, azo antoka fa mbola misy voandalana mahafinaritra azo antenaina mbola tsy voazara any aminao any.
Nampidirin'i Latina 12 Nov 2008, 10:26
Miarahaba anao tonga soa, ary misaotra amin'ny voan-dalana fa nahafinaritra.
Nampidirin'i ni81 12 Nov 2008, 10:31
Misaotra mitondra an'ireto sary sy vaovao mahafinaritra.
Eo ihany ny fandrosoana any Dago...
Nampidirin'i Tritriva 12 Nov 2008, 12:35
zay zany mihitsy
Nampidirin'i sitlo 12 Nov 2008, 12:54
sali Rado, tonga soa indray
Ngôma zaho e !
Hay ve efa tonga any Dago ny bisy be le nandehanan'i valilahy Jojobe-n'i Francis Turbo e : niara-niainga ihany, 'nareo tao ambony tsisy saofera nefa toa niara-tonga !!!
Niteny irery aho : "ô ry ikalamako a, jereo h@ mpitarika posy manana finday, ianao ity toa nilaozan'ny toetr'andro lavitra be mihitsy" - mdr
Dia misaotra foana e
Nampidirin'i ikalamako 12 Nov 2008, 12:59
tsara ny voan-dalana mba omeo ihany koa ireo hafa. tsy ho ela ihany koa izahay dia hitodidoha hoan'i MADA fa nanao fivahinana teto France ho hita eo ny fanomezanana ny vaovao mirary soa hoanareo rehetra aty tany lavitra aty fa akaiky ihany e! Nampidirin'i paradisa 12 Nov 2008, 13:44
Tena milay ilay sary e ! alefaso indray ny manaraka fa mahavariana tokoa ! MISAOTRA BDB !
Nampidirin'i Kdaombaramita 12 Nov 2008, 15:01
Tsy misy fisaorana Vale a!
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:05
Tsara aloha ilay Hollywood sign fa rehefa tena sahy nametraka azy io ihany dia tokony mba natao somary lehibe kokoa.
Tsikaritro fa manana ny fomba fijeriny manokana mihitsy ireny mpanamory kamiô ao Dago ireny kah.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:10
Marina mihitsy ny teninao fa mbola betsaka ny voandalana aty amiko fa ny fotoana hametrahana azy no tsy maintsy ho tadiavina. Misavovona indray mantsy ny asa ato taorian'iny fandehanana tany Dago iny. Misaotra nandalo sady nametraka hafatra an!
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:14
Misaotra an'i Ni81 nankafy.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:15
Samy manana ny fomba fijeriny fa ho ahy mandalo any Dago matetika dia niova haingana be ny "landscape"n'Antananarivo tamin'ity indray mitoraka ity. Azo raisina ho fandrosoana ve izany? Miankina amin'ny tsirairay angamba ny valin'iny.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:19
Be dia be ny mampihomehy ireny soratsoratra ireny fa ny olana fotsiny izy be diso tsipelina matetika. Mianatra teny diso isika mpamaky.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:23
Asa na ahoana indray ny ketrika hataon'ireo mpampihomehy ao Dago amin'izy iny. Ny tsikaritro aloha dia mitombo avo roa heny izany ny vola miditra amin'ny tompony isaky ny mandeha. Ifandrombahana hono ny mandeha amin'izy io hatreto aloha.
Nihaona tamin'ny namana Kitjo aho tany Dago. Mampamangy hono.
"Mbola mitoraka blao-gy ve ianao" hoy izy mantsy ahy? :-)
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:28
ao anatin'ny taona maromaro dia efa niova be dia be...mahafinaritra e,mankasitra tanteraka dia miandry ny hafa ndray...
Nampidirin'i fahamarinana 12 Nov 2008, 15:30
Misaotra nankafy ary mirary Soava Dia hoanareo hitodi-doha hoany Dago. Efa misy izay ilaina rehetra any fa ny "S" fotsiny no ataovy matevina. Aza manakalo vola eny amin'ny sisiny koa fa ny any amin'ny ara-dalana indray izao no ambony kokoa ny sandany.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:31
Misaotra nankafy. Alefako eo ihany ny tohiny raha vao misy irika fa aleo hiasa kely indray aloha :-) Mankasitraka e.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:33
Tena tsy taona maro fa volana vitsivitsy dia nisy fiovana be tamin'ity indray mitoraka ity ry Fahamarinana. Vao tamin'ny volana Janoary aho no tany Dago ary tsikaritro ny fiovana etsy sy eroa. Misy ny fivoarana ary misy koa ny fihemorana.
Fihemorana vitsivitsy araka ny fijeriko:
Notsoahin'ny ben'ny tananan'Antananarivo ireo tsatoka misy rojo napetraky ny ben'ny tanana teo aloha izay mba nanome endrika sady nampadiodio an'Analakely. Lasa rakotra fiara indray izany iny eny Analakely iny.
Niverina nivarotra eny Behoririka indray ireo mpivarotra amoron-dalana na dia efa nifindra toeran-kafa aza izy teo aloha. Mifanitsa-kitro indray iny lalana mankany Andravoahangy iny.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:41
15000 Ariary (75 000 fmg) raha tsy diso aho dia efa mahazo finday ZTE vaovao miaraka amin'ny fahana 5000 ariary any amin'ny Botika Orange. Ny finday "Felaka" eny amin'ny sisiny moa mety mbola ho mora noho ireo hoan'ireo tsy mahatakatra ny vaovao.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 15:46
Tiako be ilay hoe: "Fikasana an'ny saofera fa didy an'ny moteur"
Be zavatra niova be any raha tsy hiteny afatsy ilay soratra be io, ny rova aza moa efa tena mandroso be ny asa
Misaotra nizara :)
Nampidirin'i maintikely 12 Nov 2008, 15:48
ilay double-decker no tena innovation @ zao kle :)
mampatsiaro an'le hiran'i 18.3 :)
sa moa gothlieb no nanao scketch t@ iny :P
misaotra @ sary eee
Tsy mandiso fanatenana :)
Nampidirin'i simp 12 Nov 2008, 15:54
hay mbola mahatsiaro antsika i kitjo ? Ela izany an !!!
Nampidirin'i ikalamako 12 Nov 2008, 19:04
Mifono zava-dalina be ireo teny ireo hoy ilay namako tia manala izay. Betsaka ny fanamboarana na koa fanavaozana goavana mandeha ao amin'ny tanana ao amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga any ianao mahita izy. Misaotra nandalo nitsidika e. :-) Nampidirin'i Radotiana 12 Nov 2008, 19:19
Hoan'i Maintikely ilay hafatra talohan'ity fa gaga aho tsy mety miseho ny anarany :-(
Manomboka mahasahy mampidi-java-vaovao ny gasy kah.
Misaotra an'i Simp nankafy.
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 19:25
Misy hetsika fanampiana ny ankizy any ambanivohitra izay iarahanay miasa amin'i Kitjo. Manina ny fitorahana blao-gy teto hono izy saingy tsy afa manohatra...
Nampidirin'i radotiana 12 Nov 2008, 19:31
Misaotra mizara voandalana aminy tary tsy de afaka mande any aminy tanana eh. Mazava tsara daholo ny fanazavana. milay be
Nampidirin'i Nirina Jessica 12 Nov 2008, 23:53
Milay rehefa mankafy ianareo. Betsaka ny ketrika vaovao any. Mitobaka be ny fiara 4sy4 ao andrenivohitra. Betsaka modely milay tsy fahitako aty amin'ny bekintana. Be ny manambola fa vam na US$40.000 any ho any ny ankamaroan'ireo. Ny elanelana mampisaraka ny mahantra sy ny manankarena no hitako fa mifanalavitra hatrany.
Nampidirin'i Radotiana 13 Nov 2008, 00:34
>Ny elanelana mampisaraka ny mahantra sy ny manankarena no hitako fa mifanalavitra hatrany.
Tena marina fa ny fitsinjaran-karena no tena miangatra. Misaotra tamin'ireo sary
Nampidirin'i tomavana 13 Nov 2008, 12:47
Ao tsara dhl e! sady ampy tsara ny sary mahalaza zavatra maro
Nampidirin'i news2dago 13 Nov 2008, 13:24
Asa na mba hisy akony amin'ny fampifanantonana io elanelana eo amin'ny sarangan'ny mahantra sy ny manankarena io ireo ketrika fampindramam-bola hivoarana toy ny CECAM, OTIV, sns efa mba mielim-patrana any ambanivohitra rehetra any.
Nampidirin'i Radotiana 13 Nov 2008, 16:43
Misaotra nitsidika sady nankafy.
Nampidirin'i Radotiana 13 Nov 2008, 16:48
Io rano iray vera io ve ry Rado manala hataheta no sady mampaninona koa? Toa tsy ampy manko io raha ny fiheverako ny filana rano amin'ny vatana raha amin'izao fotoanan' ny hafanana manerana izao!
Misaotra nitondra voandalana!
Nampidirin'i soanja 14 Nov 2008, 00:43
Rano iray vera natao hampitoniana izay te hitroatra na mampisento avy any anaty io fa tsy natao hoan'ny hafanana manevokevoka ety ivelany :-)
Nampidirin'i Radotiana 14 Nov 2008, 01:55
Hisotro iray zany ny tenanay rahampitso maraina fa tsy nahatratra an'i Alpha Blondy tao Antsonjombe!
Misaotra amin'ny fanafody mahasoa.
Nampidirin'i soanja 14 Nov 2008, 04:39
Indray mandeha tsy miverina ihany iny Alpha Blondy iny kah. :-(
Sa ve moa nilaza ny mbola hiverina any Dago i leiry?
Nampidirin'i Radotiana 14 Nov 2008, 23:37
No-tagger-ko ianao aty Be Kintana fa mba tiako ho fantatra ny fijerinareo, mandehana jereo azafady. Misaotra manohy.
Nampidirin'i kdaombaramita 24 Nov 2008, 11:37